Mofon’aina – ALAKAMISY 15 FEBROARY 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAKAMISY 15 FEBROARY 2018
14 Ary soraty ho amin’ ny anjelin’ ny fiangonana any Laodikia: Izao no lazain’ ny Amena, dia Ilay Vavolombelona mahatoky sy marina, Izay niandohan’ izao zavatra noharin’ Andriamanitra izao:15 Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao; aleo ho mangatsiaka na ho mafana ianao.16 Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa haloan’ ny vavako ianao;17 fa hoy ianao: Manan-karena sy efa nihary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory; kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka;18 dia manoro hevitra anao Aho hividy Amiko volamena voadio tamin’ ny afo, mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy hotafinao, mba tsy hisehoan’ ny henatrao noho ny fitanjahana, ary odi-maso hahosotrao ny masonao mba hahiratanao.19 Izay rehetra tiako no anariko sy faizako; koa dia mazotoa ianao, ka mibebaha.20 Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy Amiko.21 Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka Amiko eo ambonin’ ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin’ ny Raiko eo ambonin’ ny seza fiandrianany.22 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ ny Fanahy amin’ ny fiangonana.
1-Ny toerana misy anao ankehitriny
Tanàna nanankarena i Laodikia satria tao no nisy ny lamba volonondry mainty manopy manga izay heverina ho tsara tokoa . Tao koa ny fisian’ny sekoly fitsaboana sy ny menaka fanosotra amin’ny maso. Nirehareha fatratra ny mponina. Tafapaka hatrany amin’ny fiainam-piangonana sy ny fanolorantenan’ny olona izany. Mandroso ny toe-karena ka tsy dia nahoana loatra ny fanarahana ny Tompo: « fa satria tsy mafana na mangatsiaka » . Matetika tokoa rehefa mizotra tsara ny fiainan’ny olona ara-toekarena dia mihena ny fahavononana hanompo ny Tompo. Tsarovy tsy ankasitrahan’ny Tompo izany.
2-Miantso anao hiverina Aminy ny Tompo
Tia ny olony Andriamanitra. Indro Izy manao antso mba hanavaozan’ny olona ny fanolorantena . Asehon’Andriamanitra eto fa ny tena fiainana dia ao Aminy irery ihany. Izy no manana ny fitafiana mendrika maneho ny fahamasinan’ny olona. Izy no manana ny odimaso manafaka ny olona amin’ny fahajambana ka mampitodika ny lolona ho amin’ny tena fiainana. Raha manaiky hiverina amin’ Andriamanitra ny olona , mampandroso Azy ao ampo dia manana fifandraisana akaiky Aminy ka ho fiainam-pifaliana no ivelomany isan’andro satria manana ny zavatra rehetra Andriamanitra . Miantso anao koa Izy, koa miverena ! Aza variana amin’ny zavatr hita maso ankehitriny.
Nahoana no tsy ankasitrahan’ny Tompo ny fiainan’ny fiangonana tao Laodikia ? Inona no toro-marika ho anao?
Mofon'aina - ALAROBIA 14…